9 zvikonzero zvekutenga eReader maringe nebhuku repepa | MaReaders ese
9 zvikonzero zvekutenga eReader pamusoro pebhuku rebepa
Villamandos | | eBooks, vaverengi
Pane dzakawanda shamwari neshamwari Munguva pfupi ndakabvunzwa maonero angu kana ndichitenga eReader kana bhuku remagetsi uye mumwe wemibvunzo yako kana nyeredzi mibvunzo ndeyekuti kana ndikakwanisa kutsanangura zvikonzero nei zvichinakidza kutenga eReader uchienzaniswa ne yechinyakare bhuku mupepa fomati.
Kuti imi mose mubvise kusahadzika kwakajairika, ndafunga kunyora chinyorwa ichi chakanzi; "9 zvikonzero zvekutenga eReader maringe nebhuku repepa" Ndinovimba ndinogona kupedza kusahadzika kwako kwakawanda.
1- Mitengo yeReaders yadonha zvakanyanya munguva dzichangopfuura uye semuenzaniso inonyanya kukosha yeAmazon Kindle inotemerwa pa79 euros. Kufunga kuti bhuku roga roga mupepa fomati raive nemutengo wemayuro gumi nekutenga mabhuku masere chete isu taitove takamisikidza mutengo wechigadzirwa
2- Iwo emagetsi inki masikirini emabhuku emagetsi akavandudza zvakanyanya munguva dzichangopfuura kusvika padanho rekutipa chiitiko chakafanana chaizvo neicho chetsika bepa.
3- Mabhuku edhijitari anogona kutengwa kune maReaders anenge asingagumi uye semuenzaniso Amazon yatove nemazita anodarika mamirioni maviri aripo, ayo makumi manomwe ezviuru ari muchiSpanish
4- Mambure enetiweki zuva rega rega anotambudzwa zvakanyanya nemahara uye emahara kurodha maBooks kuti kuverenga bhuku pamwedzi, vhiki kana kunyange zuva rinogona kubuda nemutengo wakaderera wezero euros
5- Mamwe mabasa echinyakare emabhuku akadai saCervantes, Quevedo, Molière kana Shakespeare haasisina kodzero dzekopa nekuti dzakapera, saka zvinokwanisika kuwana dzese mahara
6- Kurema kweReader kushoma uye kuoma kwemuviri izvo kusvika parizvino kwaifanira kuverengerwa, semuenzaniso, "Mbiru dzePasi" uye mazana emapeji akanyangarika.
7- Mabhuku emagetsi anosanganisira ruzivo rwakakosha uye sarudzo senge maduramazwi, mukana wekugadzira zvinyorwa kana kutara izvo zvisingasanganisi mabhuku echinyakare mumhando yemapepa
8- Vanyori vanogona kushambadza avo mabhuku, saka pane huwandu hukuru hwemabhuku edhijitari pane anowanzoitika uye akasiyana misoro isingazombosarudza kuburitswa mupepa fomati.
9- Services se Amazon Cloud Drive Ivo vanotibvumidza isu kuchengeta isingaverengeke yemabhuku edhijitari mugore uye ayo isu atinogona kuwana zvirinyore kubva kune yedu eReader uye tisingagare pakona yega yega yeimba yedu
Mamwe mashoko - Kupisa nekuda kwekudzivirira mwana "akaverenga zvakawandisa"
Yakazara nzira kuchinyorwa: MaReaders ese » Software » eBooks » 9 zvikonzero zvekutenga eReader pamusoro pebhuku rebepa
Iwo mukana wepamusoro wakashaikwa, chingangoita chikonzero chete nei, kunyangwe kana ndikave nebhuku papepa, ini ndinorirodha pasi ndoritakudza mubook racho: rinokuisira peji racho! Hapana mabhukumaka ari kudonha, hapana mapepa ekupeta. Zvakareruka, kana iwe ukaibatidza pairi inorangarira kwawanga uchienda, uye voila.
Kunze kweizvi, ini ndaizopfupikisa mukuti vanogara zvishoma, vanogona kutakurwa kwese kwese, uye vanoverenga sepepa, kunyangwe (mamwe mamodheru) zvirinani, nekuti vane mwenje wavo uye vanogona kuverengwa murima. Dzimwe nharo dzakabatana, uye ngatizvitarisei, handifunge kuti tinogonesa vanhu vazhinji nekuvaudza kuti Molière mabasa akazara anogona kuverengwa 🙂
Pindura Jesús Jiménez
Iwo mukana waive usati wauya kwandiri uye ndewupi chikonzero iwe uri lol.
Shamwari shamwari yangu!
RFOG RANO akadaro
Iwe unotonhorera chaizvo, Villamandos. Mune poindi 1, kukurudzira piracy. Izvo zvinofanirwa kuyerwa musiyano uripo pakati pemutengo webhuku repepa neyemagetsi, iyo muSpain, zvinosuruvarisa uye nekutenda kuKurongeka -Hurumende kubatana, pane musiyano mushoma.
Handina kuverenga mamwe mapoinzi. Yekutanga uye kurudziro yako yeupirisita yakandikwanira.
Pindura kuna RFOG RANO
Icho chirongwa chaGutenberg chinonzwika kuva chakajairika kwauri here? Hazvisi zvese zvaunotora paInternet "hazvisi pamutemo" (mumakotesheni emakotesheni nekuti nemutemo uripo hapana kana chiri kana pasina purofiti). Uye kekupedzisira pandakatarisa, kukutengera Don Quixote pabepa kwanga kuchiri kukosha mari.
Ini ndicharamba ndichiverenga iyo yekupinda :-), asi ini ndinoomerera kuti ndinofanira kunge ndakazvikwanisa.
Ndiri kuona kuti wakaratidza. Izvo zvinotsanangurwa gare gare muchinyorwa uye muForamu isu tine chikamu cherudzi urwu rwemabhuku.
Semuenzaniso, mune iyo Kindle Chitoro iwe une emahara mabhuku emarudzi ese marudzi ese mazuva, kunyangwe mamwe achangoburitswa.
Kwazisai uye kanganwira toni kubva pamberi pekuti ini ndanga ndisina kuverenga chirevo ichi.
Piracy? Iyo network yemambure izere nemahara emahara emahara eBooks.
Iwe unofanirwa kuve neruzivo zviri nani usati wapomera chero munhu chero chinhu.
Iwe unokanganwa chakanyanya kukosha: nyaradzo. Hazvina kufanana kuverenga bhuku repepa rakarara (rine huremu hwakati wandei kunyanya kana risiri rekudhinda muhomwe uye unofanira kurivhura nemaoko maviri) apo kubata munhu anoverenga kuri nyore uye kureruka…. tisingareve kuti paunoverenga bhuku repepa une izvozvo: bhuku. Mukuverenga unotakura mazana kana zviuru zvemabhuku. Kwandiri hapana ruvara, sezvo ini ndachinjira kune muverengi ini ndaingoverenga papepa izvo zvandisingakwanise kuwana mune yedhijitari fomati.
Chine poindi 6 handiti? ...
Leñe wagona! Ndine urombo, ndarasikirwa nepfungwa iyoyo.
Hapana, hazvina basa! 😉
Deirdre musikana akadaro
Uye kune zvakare kuve nekukwanisa kuverenga mabhuku akati wandei panguva imwe chete usingasarudze kuti ndeipi yaunotora ukaenda nayo usati wabva pamba. Kwete izvozvo chete, pane zvinowedzerwa zvewebhu mabhurawuza zvinoshandura zvinyorwa nezvakatumirwa kuita fomati inoverengwa kune vanoverenga, kuti ugone kuzvichengeta kuti uzviverenge gare gare pasina kusiya maziso ako pakombuta.
Pindura Musikana Deirdre
Ndinoda kuwedzera mazwi maviri, kana muchida. Kune rimwe divi mune poindi 1, handifunge kuti inokurudzira piracy, pane kudaro. Nezve point 6, ndinofunga kuti pane ino poindi kuvapo kweReader kwakakosha. Ndiri munyori wenhoroondo uye dai ndanga ndiine chishandiso chakadai panzvimbo pekutakura mabhuroko, zvinhu zvingadai zvakashanduka zvakanyanya Nenzira, ini ndinotsigira mabhukumaki, isu tinofanirwa kuita chikumbiro paKushandisa.org kuchengetedza uyu musika, hehehe. Kwaziso.
Pindura Joaquín García
Dzidziso: dhawunirodha mabhuku eiyo Kindle app inowanika kune nhare mbozha uye mapiritsi
Iyo Kindle DX yadzoka pakutengesa, chii chinonzi Amazon kusvika?